Kenya oo sheegtay inay dishay 19 Shabaab ah, hubna ay gacanta ku dhigtay – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Amisom, ayaa sheegay in 19 ka mid ah Ciidamada Shabaab ay Arbacadi ku dileen iska horimaad ka dhacay degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada hoose.
Af-hayeenka milateriga Kenya Col. David Obonyo ayaa sheegay in dagaalka ay Shabaab uga qabsadeen hal Gaari, 10 qori oo AK-47 ah, Garneyl garabka laga tuuro iyo 3 Baasuuke.
Af-hayeenka ayaa intaas raaciyay in dilka ragga ka tirsanaa Al-Shabaab uu dhacay 10-kii barqanimo ee shalay, xilli Shabaabka ay qorsheynayeen weerar ay ku qaadaan Saldhig ciidanka Kenya iyo kuwa Somaliya ay ku leeyihiin Degmada Af-madow ee gobolka Jubbada hoose.
Afhayeenka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qorsheyneysay weerar ay ku soo qaado saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya iyo ciidanka qaranka Soomaaliya (SNA), isagoo intaas raaciyay inay si deg deg ah isaga caabbiyeen ciidanka KDF-ta ee gaarka ka hayay saldhigga, sidaana waxaa ka soo xiganay wargeyska Standard ee ka soo baxa magaalada Nayrobi.
War saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka KDF ee dalka Kenya laguma sheegin haddii uu jiro khasaare soo gaaray ciidanka Kenya Amisom.
Shabaab dhankooda wax war ah kama soo bixin oo ku aadan Sheegashada Kenya ee ah inay dileen 19 dagaalyahan oo Shabaab ka tirsan.